Madaxweynaha Soomaaliya oo eedaymo u jeediyey dawladda Kenya, kana hadlay faragelinta Millateri ee ay ka fuliyeen gobollada koonfurta | Berberanews.com
Madaxweynaha Soomaaliya oo eedaymo u jeediyey dawladda Kenya, kana hadlay faragelinta Millateri ee ay ka fuliyeen gobollada koonfurta
October 24, 2011 | Published by: Maax
Muqdisho-(Berberanews)- Madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif Sheekh Axmed, ayaa ka hadlay howlgallada dowladda ay Ciidammada Millateriga Kenya ay ka waddo gobollada Koonfurta Soomaaliya, isagoo sheegay inay dadka Soomaaliyeed ay aad ugu wareereen waxa ka socda meesha.
Madaxweynaha Soomaaliya, waxa uu cambaareeyey faragelinta Ciidammada Kenya ka wadaan gudaha dalka Soomaaliya, oo uu sheegay wax ay dawladda iskaga ogyihiin inaanay jirin. “Markii dowladda KMG ah lasoo dhisay, dowladaha dairska ah oo ay Kenya ka mid tahay waxaan ka dalbanay inay ciidammo noo tababaraan, waana la tababaray ujeedaduna waxay ahayd inay ka qaybqaataan nabad soo celinta iyo xoreynta dalka howshaasuna way billaabatay.” Sidaa ayuu yidhi Sheekh Shariif.
Waxaanu Madaxweynaha Soomaaliya oo hadalkiisa sii wataa intaa ku daray; “Waxa jira waxyaabo yar-yar oo aan u argno inaanay habboonayn, waanannu kala hadalnay dowladda Kenya. Waxaana ka mid ah waxyaabahaas inay ciidammo iska soo galaan dalka, shacabka Soomaaliyeed ma oggola taas, dowladduna ma oggola.”
Madaxweynuhu wuxuu intaas ku daray in ciidammada AMISOM ay dalka ku joogaan ogolaashaha shacabka Soomaaliyeed iyo kan dowladda KMG ah, sidoo kale ay ka haystaan ogolaasho ururka Midowga Afrika iyo Qarammada Midoobay.
“Dowladda Kenya iskaashi ayaa naga dhexeeya, waxaana kala hadalnay habka aan innagu u rabno inay noo caawiyaan oo ah mid cad, kaasoo ah in ciidamada DKMG ah ay diyaar u yihiin inay shaqada qabsadaan, Kenyana aan uga baahannahay inay ciidamadeenna gacan siiyaan, balse aanay dhicin wax intaas ka duwan.” ayuu yidhi Sheekh Shariif.
Isagoo arrintan kasii hadalaya ayaa wuxuu sheegay in Kenya ay gaadhsiiyeen inay aad uga xun yihiin inay dalkooda dhibaato u geysato Al-shabaab, balse loo baahan yahay in labada dal ay iska kaashadaan sidii loo xaqiijin lahaa amniga.
Waa markii ugu horreysay oo mas’uul ka tirsan dowladda KMG ah ee Soomaaliya uu uga digo dowladda Kenya faragelinta ciidan, iyadoo madaxda Kenya ay sheegeen in ciidamadooda ay gudaha Soomaaliya kula dagaalamayaan Al-shabaab, dawladda Soomaaliyana ka wada socdaan, taasoo aan hadda wax cusub ahayn ee toddobaad iyo dheeraad muddo laga joogo ay gudaha Soomaaliya soo galeen Ciidammada Millateriga Kenya, isla markaana hawlgallo Ciidan ka fuliyeen gobollada Koonfurta dalka Soomaaliya.